Bigasoft Video Downloader Pro 3.12.8 Keygen Full - ဇော်မင်းသန်း ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2
ဆော့ဝဲလ် များနှင့် စွယ်စုံနည်းပညာများ
ကျနော့် Facebook အကောင့်လေးပါ
ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း (မြန်မာစာတန်းထိုး ဇတ်ကားများနှင့် နည်းပညာများ)
အသစ်တင်တိုင်း Facebook မှာ ဖတ်ချင်ရင် Like ထားပေးပါ
Bigasoft Video Downloader Pro 3.12.8 Keygen Full
YouTube, Facebook, Google တို့မှစတဲ့ အွန်လိုင်းရုပ်ရှင်များကို မိမိတို့ကွန်ပျူတာကနေ လွယ်ကူစွာဒေါင်း
လော့ဆွဲချင်တဲ့ ချစ်မိတ်များအတွက် Bigasoft Video Downloader Pro နောက်ဆုံးထွက် ဗားရှင်းအသစ်
ကို မြဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ဒေါင်းထားတဲ့ Video,Music ကိုလည်း မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဖိုင်ဆိုက်တွေနဲ့ HD
၊ HQ နှင့် 3D movies ကို Format လုပ်ယူနိုင်သည် convert လုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်း MP4, AVI,WM
V, MOV, MKV, FLV, MPG, VOB စသည်တို့ကို playback ပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ဖိုင်ဆိုက် 62.14 MB သာရှိ
ပြီး Windows XP/Vista/7/8/8.1/7/8/8.1/10 (32- bit /64-bit)ရှိတဲ့ စက်တွေအားလုံးမှာအသုံးပြုနိုင်ပါ
တယ် Full ဖြစ်ဖို့အတွက် Keygen ထည့်သွင်းထားပါတယ်။အားလုံးအဆင်ပြေပါစေဗျ။
- Save Online Videos
- Convert Online Videos
- Convert Video to MP3, WAV, M4A
- Download Video Playlist
- Turn your computer intoaflexible video capture and recording device
- 2X Faster Downloading Speed, 30X Conversion Speed
- Save the History of the Downloaded Videos
- Save High-quality Video
- Adjust the Order of the Downloading Videos
- Designed for Windows 10
- ဆီးရီးကီး ==>> A314-EF90-855D-1434-DB08-82B1-03DC-23C6
░░░▒▓██ Download HERE ██▓▒░░░
အမျိုးအစား Computer Software
လတ်တလော အဖတ်များဆုံး စာမျက်နှာများ
မြန်​မာ နှစ်​ ၁၀၀ ပြက္ခဒိန်​ 1910 မှ 2020 အထိ (အသစ်​ထွက်​ထားတဲ့ပြက္ခဒန်​ ဖြစ်​ပါတယ်​။ Android ဖုန်းသုံးတဲ့ မြန်​မာလူမျိုးတိုင်း ​ဆောင်​ထားသင့်​ပါတယ်​)
ဒီနှစ်​မှ အသစ်​ထွက်​ထားတဲ့ မြန်​မာ နှစ်​၁၀၀ ပြက္ခဒိန်​ဖြစ်​ပါတယ်​။ အရင်​က အ​ဟောင်းထက်​ Feature ​တွေ ပိုစုံလာပါတယ်​။ ဒီဇိုင်...
Hello Premium5Firmware 100% Ok (စမ်းပြီးသား အားလုံးအဆင်​​ပြေ ဖုန်း​ဘေ​ပေးစရာမလို Password မခံထားပါ)
ရှားပါး Firmware ဖြစ်​တဲ့ Hello Premium5 ​မော်​ဒယ်​ကို Free တင်​​ပေး လိုက်​တယ်​။ ဖုန်း​ဘေ ပို့​ပေးစရာမလို ကိုယ်​တိုင်​စမ်းပြီးသားမိ...
CyberLink PowerDirector Video Editting Effect (Vieo တည်းဖြတ် ဖို့ Effect အလန်းများ 32000 ကျော် စိတ်ကြိုက် ဒေါင်းနိုင်ပြီ)
Video တည်းဖြတ် ၀ါဒနာပါတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် Effect အလန်း ဒေါင်းနိုင်အောင် လမ်းညွှန်ပေး လိုက်ပါတယ်။ တကယ်ကိုလန်းပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဗီဒီယို...
Sim Card တစ်​ကတ်​ထဲဖုန်းကို ဖုန်းနံပါတ်​ ၂ ခု သုံးချင်​သူ​တွေအတွက်​ နည်းလမ်း​ကောင်း။ ​ဆောဝဲမလို အင်တာနက်လိုင်း​မလို ပိုက်ဆံမစားဘူး​​​။ တကယ်​အသုံးဝင်​တာ​နော်​။
ကျ​နော်​တို့ဖုန်းထဲမှာ MPT Sim သုံးထားတယ်​​ပေါ့ဗျာ။ အဲတာ ဖုန်းကလည်း Sim တခုထဲသုံးလို့ရတယ်​ Telenor ကိုလည်းသုံးချင်​တယ်​ အဲမှာ အ...
Panorama 360 Camera VR video ပုံ​တွေ​ကို 360° နဲ့ ရိုက်​လို့ရတဲ့​ဆော့ဝဲ
ပုံနှင့်​ Video ​တွေကို 360° နဲ့ရိုက်​ပြီး Save ထားလို့ရတဲ့​ဆော့ဝဲလ်​ ​ဖြစ်​ပါတယ်​။ သုံးနည်းကို Video ဖိုင်​နဲ့တင်​​ပေးမလို့ပဲ၊ အရမ်းလ...
MM Aio Zawgyi Font Changer Pro (Android Version 4.4.4 အထိမြန်​မာ​ဖောင့်​သွင်းနိုင်​တဲ့​ Font Changer)
ဒီ​ဆော့ဝဲ​လေးက​တော့ Android Version 4.4.4 အထိ မြန်​မာစာ မှန်​မှန်​နဲ့ အချို့ဖုန်း​တွေဆို System Myanmar Font ​တောင်​သွင်းလို့ရပါတယ်...
DriverPack Solution 14.6 R416 ISO (Window တင်ပြီးရင် လိုအပ်တဲ့ Driver တွေကို Offline Install နိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်)
ကျနော်တို့ ကွန်ပျူတာတွေမှာ Window တင်ပြီးရင် Driver တွေကို လူတိုင်းလိုအပ်ပါတယ်။ Driver မရှိသေးသူအတွက် DriverPack Solution 14 ကို ဆောင်ထ...
Install ပြီးသား Android ဖုန်းထဲက Application ​တွေကို ဖုန်း SD Card ထဲ Back Up ပြန်​ယူနည်း
ဒီဆောဝဲလေးကတော့ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းအသုံးဝင်ပါတယ်.။ Install ထားပြီးတဲ့app တွေကို.....Backups ခြင်းဖြင့် ပြန်လည်ထုတ်ယူ သိမ်းဆည်းချင်သူ...
CyberLink PowerDirector အသုံးပြုနည်းစာအုပ်
Video တည်းဖြတ်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အားလုံးထဲမှာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်တဲ့တည်းဖြတ် ဆောဝဲ CyberLink PowerDirector နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ...
✏အခြေခံ Mobile Hardware Service လေ့လာသူများအတွက် Digital Multi Meter အသုံးပြုနည်း စာအုပ်✏
အခြေခံ Mobile Hardware Service လေ့လာသူများအတွက် Digital Multi Meter အသုံးပြုနည်းဖြစ် ပါတယ်။ Digital Multi Meter တစ်လုံးမှာ တိုင်းတာလို...
အလည်​လာ မိတ်​​ဆွေများ မန်​ဘာဝင်​နိုင်​ပါတယ်​
Android Version 5.0 Lollipot အထိ အသုံးပြုနိုင်​တဲ့ မြန်​မာ / မွန်​ ​ဖောင့်​ဖြစ်​ပါတယ်​။ ( Root စရာမလိုပဲ Font Style ပါတဲ့ ဖုန်းတိုင်း အသုံးပြုနိုင်​ပါတယ်​)
အခုတင်​​ပေးလိုက်​တဲ့ ​ဖောင့်​က မြန်​မာစာ​ရော မွန်​စာ​ရော ​ဖောင့်​တခုထဲနဲ့ပင်​ အသုံးပြုနိုင်​တဲ့ မွန်​​ဖောင့်​ ဖြစ်​ပါတယ်​။ မွန်​လူမျိုး...
ကျနော်တို့ အများဆုံးကြုံနေရတဲ့ Samsung ဖုန်းတွေမှာ မြန်မာစာမမှန်လို့ Font Style ချိန်းပြီး သုံးတာအဆင်ပြေပေမဲ့ Link တခုခုဝင်ရင်ြ...
Bagan Keybroad Perminum 5.6 (Key ထည့်​စရာမလိုတဲ့ Activated ဖြစ်​ပြီးသား Bagan Keybeoad)
Bagan Keybroad အတွက်​ Key မလိုတဲ့ Version 5.6 ကိုတင်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​။ အခု​တော့ Version6​ကျော်​ထိ ထွက်​​ ​နေပါပြီ။ Activated ဖြစ်ြ...
MMAio Mon Zawgyi Font Changer Android Version 4.4.4 အထိ အသုံးပြုနိုင်​တဲ့ Mon Font ​ရော Myanmar Font ပါ အဆင်​​ပြေ​စေမဲ့ Font Changer ဖြစ်​ပါတယ်​။ ( Root ထားတဲ့ မည်​သည့်​ Android ဖုန်း ကိုမဆို Version 4.4.4 အထိ အသုံးပြုနိုင်​ပါတယ်​။)
ဒီ ​Font Changer က​တော့ ကျ​နော်​ ​ဇော်​မင်းသန်း ကိုယ်​တိုင်​ Modify ပြန်​လုပ်​ထားတဲ့ Font Changer ဖြစ်​​ပါတယ်​။ Font Style မပါတဲ့...
မိမိတို့ Android ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ Youtube Video ​တွေကို အလွယ်​​ဒေါင်းနည်း။
ဒီ​နေ့​တော့ သူငယ်​ချင်း​တွေကို Android ဖုန်း Youtube က​နေ Video ​တွေ​ဒေါင်းနည်းကိုတင်​​ပေးပါမယ်​။ ဒီနည်းက ​ဆောဝဲ​လေးတခု ဖုန်းမ...
Format လို့မရသော Memory stick အပျက်တွေ ပြုပြင်နည်း
Format လို့မရသော Memory stick ပြဿနာ တခုကို လိုက်ရှာရင်း ဒီနည်းလေးတခုတွေ့လို့ပြန် ရှယ်ပေးလိုက်တာပါ။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်ရေးတာတော့ဟုတ်ဘူး...
ဖုန်းထဲက သီချင်းသံကို နှစ် ဆ ကျယ်လာစေမယ့် Sensor music player (for andriod)
Android ဖုန်းတွေမှာ သီချင်းဖွင့်နားထောင်လို့ အသံတိုးနေတယ်ဆိုရင် Sensor Music Player လေးကို သုံးကြည့်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ရိုးရိုး...
Facebook မှာတင်တဲ့ video ဖိုင်တွေကို ဒေါင်းမယ် အခု ကျနော်ရေးမယ့် အကြောင်းကတော့.. ကျနော့် Pages မှာ အကြိမ် ၁၀၀ ကျော်မကမေးထားကြတဲ့ ...
Copyright © 2011. ဇော်မင်းသန်း - All Rights Reserved